budozar.admin – BUDOZAR
စက်ယန္တယားတွေနဲ့ကားတွေမှာ Air Filter ဟာ အရေးပါလွန်းတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Air Filter တွေကို ဂရုတစိုက်နဲ့ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်သလို စစ်ဆေးပြီး အသစ်လဲသစ်ရင်လည်း လဲပေးရပါမယ်။
ဘယ်လိုအချက်လေးတွေကို သတိထားမိရင် Air Filter တွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးသင့်လဲဆိုတာကို တစ်ချက်လောက်လေ့လာကြည့်ပါ။
1. Air Filter ကိုယ်ထည်ညစ်ပတ်ခြင်း။
Air Filter တစ်လုံးဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အမဲရောင်ဘက်သမ်းလာပြီဆိုရင် သင့် Air Filter ကိုသန့်ရှင်းသင့်ပါပြီ။ Air Filter ကို လုံလောက်တဲ့အလင်းရောင်ရမရစစ်ဆေးပြီး အဲ့ဒီအလင်းရောင်ကြောင့် Air Filter ကနေစစ်ထုတ်ပေးနေတဲ့ အမှိုက်သရိုက်တွေ စုပုံနေလား မစုပုံဘူးလားဆိုတာ စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်။
2. ဂတ်စ်ဒါမှမဟုတ် ဆီကုန်နေလား။
ဂတ်စ်ဒါမှမဟုတ် ဆီကုန်နေတဲ့ လက္ခဏာပြရင် Air Filter ကိုစစ်ဆေးကြည့်ဖို့လိုပါပြီ။ Air Filter က Fuel အတွက် အထောက်အကူပြုပေးပေမဲ့ ညစ်ပတ်နေတဲ့ Air Filter ဆိုရင်တော့ အောက်ဆီဂျင် စီးဆင်းမှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ ဂတ်စ်တွေ ဆီတွေကို အကုန်မြန်စေပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်တော့ မဖြစ်ဘူးမလား။ Air Filter ကို သန့်ရှင်းဖို့လိုပါတယ်။
3. လေနဲ့ဆီရဲ့အချိုးနှုန်းကို စစ်ဆေးပြီးပြီလား။
လေနဲ့ဆီရဲ့အချိုးနှုန်းမှာ ဆီအချိုးနှုန်းကပိုများနေရင် အင်ဂျင် ဂျန့်ဖြစ်ပြီး စက်နှိုးတဲ့ ပလပ်ဂ်မှာ ချေးပိတ်နေတတ်ပါတယ်။စက်နှိုးလို့မရတဲ့ အဖြေကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ Air Filter ကိုပါ စစ်ဆေးကြည့်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့ဗျာ။
သင့်စက်ယန္တယားအသံထွက်က ပြောင်းလဲသွားပြီဆိုရင်တော့ Air Filter တွေကို သန့်ရှင်းဖို့လိုပါပြီ။ Air Filter တွေကနေ အောက်ဆီဂျင်တွေ ကောင်းမွန်စွာ မဖြတ်သန်းနိုင်တော့ရင် ကားတွေတုန်ခါလာပြီး အင်ဂျင်အသံတွေဟာလည်း ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
5. Engine Light ကိုပါ စစ်ဆေးမယ်။
အင်ဂျင်မှာ အမှိုက်တွေ အနည်ထိုင်နေပြီဆိုရင် Engine Light မှာ မီးမှိတ်တုတ်မှိတ်တုန်ဖြစ်နေတတ် ပါတယ်။ အင်ဂျင်လည်ပတ်ဖို့အတွက် လေရှိမှဖြစ်မှာမို့လို့ Air Filter သာ မသန့်ရှင်းနေရင် အင်ဂျင်မှာ လည်း ပြဿနာတက်နိုင်ပါတယ်။
6. မောင်းနှင်နှုန်း နှေးကွေးနေမယ်ဆိုရင်…
အောက်ဆီဂျင် အထောက်အပံ့ချို့ယွင်းနေရင် စက်ယန္တယားတွေရဲ့ အမြန်နှုန်းနှေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ Air Filter ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်မလား အသစ်လဲမလားဆိုတာ စစ်ဆေးသင့်ပါပြီ။
7. မီးခိုးတွေ မီးပွားတွေ အိတ်ဇောပိုက်ကနေ ထွက်နေသလား။
လုံလောက်တဲ့ အောက်ဆီဂျင်သာအင်ဂျင်ဆီမရောက်ဘူးဆိုရင် အင်ဂျင်ချို့ယွင်းနိုင်ပြီးတော့ မီးခိုးငွေ့တွေ၊ မီးပွားတွေ အိတ်ဇောပိုက်ကနေ ထွက်နိုင်ပါတယ်။ အင်ဂျင်ဝိုင်လိုအပ်လို့ မီးခိုးထွက်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တာမို့လို့ အင်ဂျင်ဝိုင်ရော Air Filter ကိုပါ စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
ဒီလိုအချက်တွေကို သေချာစစ်ဆေးပြီး သင့်စက်ယန္တယားများကို ဂရုစိုက်ပါလို့ BUDOZAR ကနေ သတိပေးပါရစေခင်ဗျာ။